Ahoana no namitan'i BoomTown ny antontam-bato nataony tamin'ny alàlan'ny antso miafina | Martech Zone
Ny resadresaka, ary indrindra ny antso an-tariby, dia mitohy ho fomba mahomby indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny olona sy hamadihana azy ireo ho mpanjifa mahatoky. Ny smartphone dia nanidy ny elanelana misy eo amin'ny fitetezana an-tserasera sy ny fanaovana antso - ary raha resaka fividianana sarobidy sy lafo vidy dia tian'ny olona hidina an-tariby ary hiresaka amin'ny olombelona. Androany, misy ny teknolojia hanampiana ny fahitana ireo antso ireo, amin'izay ny mpivarotra dia afaka mandray fanapahan-kevitra sahala amin'ny fahendrena sy data momba ny antso ataon'izy ireo amin'ny fantsona nomerika.
At BoomTown, nanambola be izahay miantso ny teknolojia faharanitan-tsaina. Orinasa rindrambaiko varotra sy varotra izahay izay manampy ny orinasam-pandraharahana manidy fifampiraharahana bebe kokoa. Raha jerena ny vahaolana dia amin'ny vidiny dimy tarehimarika, ny mpanjifanay dia tsy hividy akory - na hanolo-tena mihitsy aza amin'ny demo - alohan'ny hidirany amin'ny telefaona miaraka amin'ny solo-barotra. Vokatr'izany dia maneno foana ny telefaoninay.
Ampahany, izany no toetran'ny orinasantsika. Tian'ny olona ny trano sy trano - mahay miresaka izy ireo ary tia manao raharaham-barotra amin'ny telefaona. Fa io koa no toetran'ny asa ankehitriny: ny olona dia mitady, mizaha ary miantso amin'ny findainy rehefa mandroso amin'ny làlana mividy. Zava-dehibe ny fananan'ny ekipanay marketing ny fomba hijerena, hamakafaka ary hanatsara ireo antso inbound ireo, ary ny ekipan'ny varotra anay dia vonona hamaly antso izay mety hiova.
Nanambola izahay Cloud Marketing an'ny Invoca hanampiana sosona fijery manodidina ny fantsona ampiasain'ny ekipanay varotra indrindra. Ity data fanampiny ity dia ahafahan'ny ekipa mivarotra sy mivarotra hiasa mahomby kokoa - afaka mandray antso maro kokoa ny solontenanay ary mahazo lanja bebe kokoa avy amin'izy samy izy, ary ny ekipanay mivarotra dia afaka manondro ny fampielezan-kevitray hitarika mifamadika amin'ny telefaona.
Tamin'ny famadihana fotsiny ny Invoca, dia avy hatrany dia notapahinay ho roa ny vidinay isaky ny firaka (CPL). Izany dia satria afaka nanondro ny telefaona finday rehetra izahay tamin'ny fanentanana dizitaly isan-karazany izay nifaneraseran'ny mpanantena na ny mpanjifa alohan'ny niantsoana anay. Hainay fa tsy misy miantso sy manazava ny antsipirian'ny fomba nandrenesan'izy ireo momba anay - hitantsika fa nitady teny izy ireo, tsindrio ny rohy, nanao fikarohana, niresaka tamin'ny namana vitsivitsy momba ny safidy, ary nanao antso an-tariby . Ho an'ity làlana mividy sarotra ity dia mety holazain'izy ireo amin'ny mpivarotra am-pivarotana fa nahare momba anay tamin'ny “teny-vava” izy ireo.
Mino aho fa ilaina ho an'ny orinasa ny fiantsoana saina ankehitriny, ary misy zavatra fantatro izay afaka manampy ny mpivarotra hafa hanomboka amin'ity haitao marketing vaovao ity.
Manomboka amin'ny intelligence intelligence
Misy zavatra vitsivitsy tadiavina rehefa manombatombana ireo mpamatsy ny antso an-tariby. Ny voalohany dia fampidirana isa mavitrika. Ny fidirana nomerao mavitrika dia ahafahanao manolo nomeraon-telefaona orinasa mijanona amin'ny fananana ara-barotra - pejy fandraisana, eBook na pejy vidin'ny tranokala iray, ohatra - miaraka amina isa tsy manam-paharoa izay mifamatotra amin'ny loharanon'ny antso tsirairay. Midika izany fa azonao atao ny mahita angon-drakitra toy ny teny lakile notadiavin'ireo mpiantso, ny doka navoakan'izy ireo, ary ny pejin'ilay tranonkalanao nojeren'izy ireo alohan'ny nakana ny telefaona.
Amin'ny fampiasana Invoca, rep mpivarotra dia afaka mahita an'io fampahalalana rehetra io amin'ny fotoana ilatsahan'ny telefaona. Izy ireo koa dia manana teboka angon-drakitra hafa sarobidy, toy ny fidiram-bolan'ny mpiantso, ny fividianana tantara ary ny demografika, izay manome azy ireo ny sarin'ilay olona any amin'ny faran'ny tsipika. Manoro hevitra aho ny hampiasa an'ity fampahalalana ity mba hitarihana ny olona miantso any amin'ny solontena mety amin'ny tena izy - mpanjifa efa misy na vina VIP ho an'ny solo-varotra tsara indrindra, ohatra.
Zava-dehibe ny fampiasana sehatra iray izay mifamatotra tsara amin'ny tahirin'ny teknolojia varotra sy varotra misy anao. Izahay dia mampiasa Invoca's Facebook fampidirana mba hahitana ny fahombiazan'ny doka ara-tsosialinay; izany dia mampahafantatra antsika iza amin'ireo mpiantso antsika no voataonan'ireo doka tao amin'ny Facebook nandritra ny diany. Tena mahasoa indrindra izany izao satria manana doka tsindrio-amin'ny-antso eo amin'ny pejin'ny marika Facebook sy amin'ny dokam-barotra Facebook izahay.
Ny fampidirana Salesforce dia ahafahantsika miditra ao amin'ny angon-drakitry ny mpanjifanay ary manangana piraofilina fitarika ho an'ny mpiantso tsirairay. Ny masoivoho dia afaka mahita hoe avy aiza ny antso, iza no eo amin'ny laharana ary izay fifandraisana nifanaovan'izy ireo tamin'ny orinasanay. Manala be dia be ny miato ary atombohy lafiny amin'ny antso voalohany; ireo masoivohon'ny varotra dia afaka manamarina fotsiny ireo antsipiriany efa ananany.
Ny antso fohy dia mitazona ny fahafinaretana ho an'ny fanantenana ary mampiseho fa manome lanja ny fotoanany isika. Io dia nanafaka ihany koa ny fotoana ho an'ny solo-tananay - ny ekipanay mivarotra dia mitaky antso miisa 1,500 isam-bolana, ary io teknolojia io dia nanapaka ny faharetan'ny antso ireo hatramin'ny 1.5 ka hatramin'ny 2.5 minitra avy. Nanafaka izany ora isam-bolana izay repoblika dia afaka mandany hamorona orinasa bebe kokoa.
Ianao koa dia mila sehatra iray ahafahanao mamakafaka ny atin'ny resadresaka mitranga amin'ny alàlan'ny telefaona mba hitaomana ny fanentanana hikolokoloana amin'ny ho avy - na amin'ny tranga sasany, ampiasao izany atiny izany mba hahafahanao tsy mikolokolo ireo mpanjifa efa nividy an-tariby. Izany dia mety hahatsapa ho moana amin'ny mpanjifa izay manantena bebe kokoa ny orinasa hanome serivisy manokana amin'ny fantsona rehetra.
Mametraha tena hahombiazana
Azontsika jerena izao hoe avy aiza ny antsonay, iza no eo amin'ny laharana ary ny sahan'ilay antso. Mba hanaovana rafitra toa an'ity asa ity, dia manoro hevitra aho mba handray dingana vitsivitsy mba hahitanao bebe kokoa ny antso anaty:
Amporisiho ny nomeraon-telefaona amin'ny alàlan'ny pejin-tranonao, pejy momba ny vidiny ary ny fantsom-barotra rehetra anananao - ara-tsosialy, karoka, taratasy fotsy, webinar, hetsika ao amin'ny orinasa, na podcast aza. Ataovy mora ny fiantsoan'ny olona anao.
Mampiasà dokam-barotra amin'ny click-to-call amin'ny doka ara-tsosialy sy fikarohana nataonao, amin'izay ny olona mitady na mizaha amin'ny finday dia afaka manery bokotra iray ary miantso anao mivantana.
Mampiasà nomeraon-telefaona mavitrika isaky ny fananana, amin'izay dia ho hitanao foana hoe avy aiza ny antso. Tena ilaina amin'ny fanatsarana ny ROI marketing.
Manomboha mieritreritra antso toy ny ataonao amin'ny fanananao nomerika - ary mangataha haavon'ny fahitana mitovy amin'izay mandeha sy izay tsy mandeha.
Nahafantatra zavatra betsaka teny an-dàlana izahay ary nahita ny sasany amin'ireo fiheveranay fa tsy marina. Tamin'ny voalohany, nanantena izahay fa hiantso ny faharanitan-tsaina hampitombo ny fitarika totalinay. Tsy izany no izy - fa ny fahafantarana bebe kokoa an'ireo mpiantso anay sy ireo fanentanana izay nisy fiantraikany tamin'ny fihetsik'izy ireo dia nivadika ho sarobidy kokoa. Izahay dia nameno banga manan-danja eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery marketing, manatsara ny antso avo lenta izay mitarika fiovam-po bebe kokoa, ary namorona traikefa tsara indrindra ho an'ireo olona misafidy ny hiantso anay.
Tags: miantso ny faharanitan-tsainafanaraha-maso antsomiantso ny teknolojia fanaraha-masovidiny isaky ny mitarikafanarahana antso amin'ny facebookantso facebookinvoca
River dia talen'ny marketing ho an'ny BoomTown, sehatra fananan-tany an-tserasera miorina ao Charleston, SC. Rivers dia manana traikefa 9 taona mahery eo amin'ny sehatry ny varotra sy dokambarotra an-tserasera, miasa amin'ireo orinasa Fortune 500 maro manerana ny e-varotra, ny dia ary ny varo-tany.